Kungani uhamba uye eRoma | Ukuhamba kwe-Absolut
Kungani uhamba uye eRoma
Kungani kufanele uye eRoma? Okomlando, isiko nokudla, kunjalo! Ngaphezu kwalokho, ingelinye lamadolobha athakazelisa kakhulu futhi acebe ngokwamasiko eYurophu, ngakho-ke akekho ongawuphuthelwa, awazise futhi awuthokozele.
IRoma liyamangalisa futhi alilibaleki. Yize kungumuzi omncane, ukunikezwa kwawo kukhulu futhi kuhlukahlukene kakhulu kangangokuba uhambo olulodwa lusishiya sifuna ukubuyela. Ngakho-ke namuhla, sizobona kungani uhambela iroma ukuthola okungcono kakhulu ekusinikeza kona.
1 IRoma, idolobha laphakade
2 Yini ongayibona eRoma
IRoma, idolobha laphakade
IRoma yigama elibalulekile emlandweni wempucuko yaseNtshonalanga futhi okuheha kakhulu idolobha yilokho kanye Ifa lamaRoma: ukuba yindawo lapho ungahlangabezana khona namanxiwa nezinkomba zaleso sikhathi yonke indawo. Ukuhlangenwe nakho okokuqala akunakuqhathaniswa.
Njengamanje idolobha selinayo cishe abantu abayizigidi ezintathu kanjalo no idolobha lesithathu elinabantu abaningi e-European Union. Njengoba sekuyiminyaka eyizinkulungwane ezintathu yomlando, isifikile indlela ende eshiye uphawu lwayo emasikweni nasemphakathini wasemadolobheni. Uma singabala amadolobha ase-Asiya, iRoma ibe yidolobha elikhulu lokuqala emhlabeni.
Umuzi uphumule osebeni lomfula iTiber futhi inezindawo eziningi eziluhlaza, amagquma amnene, amahlathi, imifudlana namachibi. Inhliziyo yasendulo yaseRoma isezintabeni eziyisikhombisa: i-Aventine, iPalatine, iCapitol, i-Esquiline, iCelio, iViminal neQuirinal. Kula magquma kunezelwa ezinye izintaba, ngakho-ke lapho uhamba kuzo kwesinye isikhathi ukuhamba kuyehla kuyenyuka kusinikeza imibono emihle.
Singasho ngani Isimo sezulu saseRoma? Ihlobo liyashisa futhi vele ngo-Okthoba amazinga okushisa angaba sezingeni le- 30ºC. Kepha ubusika buyabanda futhi buyana. Intwasahlobo yisikhathi esihle sokuya eRoma ngoba ikuvumela ukuba uhambe ngokujabula ngaphandle kokuhlushwa ukushisa okukhulu. Isambulela uma kungenzeka nokuthi udaba luxazululiwe.
IRoma inezindawo zemivubukulo, izikhumbuzo zomlando, imithombo, imigwaqo ebabazekayo, izikwele nezikwele, amapaki, izigodlo ... Yini oyithandayo? Lona ngumbuzo okufanele uzibuze wona lapho uhlela uhambo noma yikuphi. Akuwona wonke umuntu othanda ukuzingcwaba eminyuziyamu, kunabantu abathanda ukwenza ukuvakasha okunamandla, abanye bathanda ukuzama ukunambitheka okusha, abanye bamane bafuna ukuhlangana nabantu futhi bahlanganyele.
Lapho usucacelwe ukuthi yiziphi izintandokazi zakho noma ukuthi yini ongafuni ukuyiphuthelwa, ungakhetha kangcono ukuthi uzovakashela ini eRoma. Uma uthanda i- umlando wakudala, lapho indawo yokuqala ukufika IColiseum yaseRoma. Phambilini le ndawo enkulu yayaziwa njengeFlavian Amphitheatre futhi yayiyindawo enkulu kunazo zonke eyakhiwe kuwo wonke uMbuso WaseRoma. Cishe ineminyaka eyizinkulungwane ezimbili ubudala, amamitha ayi-188 ubude, amamitha angama-57 ukuphakama namamitha ayi-156 ububanzi.
IColosseum yaqala ukwakhiwa ngaphansi kukahulumeni waseVespasiano futhi yaqedwa ngaphansi kukaTito, ngonyaka ka-80. Ngaleso sikhathi abantu abangaphezu kwezinkulungwane ezingama-50 beza ukujabulela umbukiso owawufaka phakathi ukulwa kwama-gladiator, ukubulawa kanye nezilwane ezingaphandle futhi, kuthiwa, kukhiqizwa kabusha kwezimpi zasolwandle.
Yasebenza amakhulu amahlanu eminyaka yabe isibhekana nokunganakwa, ukuphangwa, ukuzamazama komhlaba kanye namabhomu ezandleni zezepolitiki zaseRoma nase-Italy. Namuhla izigidi zabavakashi ziyivakashela, cishe izigidi eziyisithupha ngonyaka, futhi kusukela ngo-2007 Ngenye yezimangaliso eziyisikhombisa zomhlaba wanamuhla. Kuvulwa nsuku zonke kusukela ngo-8: 30 ekuseni kuye ku-7 ntambama, kodwa kuvalwa ngoKhisimusi nangoJanuwari 1. Ithikithi elihlanganisiwe leColosseum, iForamu nePalatine ngama-euro angama-12, kepha uma uneminyaka ephakathi kuka-18 no-24 ubudala, yehlela kuma-euro ayi-7,50.
El Isithangami SamaRoma washiywa futhi wakhohlwa amakhulu eminyaka. Yangcwatshwa futhi kuphela ngekhulu lama-XNUMX lapho kwavela khona ngokumbiwa kwanamuhla. Isithangami besiyindawo lapho kwenzeka khona impilo yomphakathi neyenkolo, ngakho-ke inamagugu amaningana.
Lapha kunamathempeli amaningana, iThempeli laseVenus, lelo likaSaturn, lelo leVesta, ngokwesibonelo, kodwa uzobona futhi i- Umnsalo weTitnoma, ukukhumbula ukunqoba kweRoma phezu kweJerusalema, i-Arch of Severinus eyeSikhombisa yonyaka ka-203 AD, iCuria lapho iSenate yayisebenza khona, Seal Ikholomu kusukela ngonyaka ka-608 AD, ngaphezu kwamamitha ayi-13 ukuphakama, iBasilica kaMaxentius noConstantine, enkulu kodwa incithakalo, noma Nge-Sacra.
El Ukukhweza kwePalatineNgokwengxenye yalo, kwakuyindawo lapho iRoma lasendulo elalicebe kakhulu futhi elinamandla kakhulu lakha khona izindawo zokuhlala futhi ezinye zazo zisasele. Lapha akufanele ulahleke UDomus Flavia, indawo yokuhlala esemthethweni neyomphakathi ka-Emperor Domitian, the Indlu kaLivia ngemidwebo yayo yomdwebo nemidwebo yayo emikhulu, i Indlu ka-Augustus, enamazinga amabili, i- Umjaho waseDomiciannoma, Izingadi Isi-Farnese futhi i IPalatine Museum.
Yiziphi ezinye izindawo okufanele sizivakashele eRoma? Ngeke ngishiye ubuhle Amabhati kaCaracalla. Ngakolunye uhlangothi, ngaphakathi kweChristian Rome ungavakashela i- I-Vatican, lo IPeter's Square, iSt Peter's Basilica, iminyuziyamu yaseVatican kanye neSistine Chapel. Futhi i UCastel Sant'Angelo nebhuloho lawo elihle laseRoma.
Vele, kuzo zonke lezi zindawo imvamisa kuba nabantu abaningi, ngakho-ke konke kuzoya ngokuthi unentshisekelo engakanani yokubazi. Manje, noma kunjalo ungahambisa ngezithuthi zomphakathi Ngisikisela ukuhamba. IRoma incane, kulula ukuthi ungalahleki futhi uma ulahleka ... kwenzekani?
Ukuhamba ngezinyawo kukuvumela ukuthi wazi ezinye zezikwele ezinhle kakhulu emhlabeni ezifana ne- INavona Square, iSan Pedro noma iSpain Square. Uzofika futhi ku- Isikhumbuzo sikaVictor Emmanuel II, inkosi yokuqala yase-Italy enobunye, kanye ICampidoglio Square.
Uma ngezizathu zenkolo, noma umthandi wezakhiwo nobuciko obungcwele, uyawathanda amasonto, ngizokutshela lokho eRoma kunamasonto amaningi namabasilica kuyaheha Izintandokazi kwezokuvakasha yilezi ISanta María Concepción, iSan Clemente, iSanta María la Mayor, iSan Juan de Letrán neSan Pablo Ngaphandle Kwamadonga.
Olunye uphawu lweRoma yi Umthombo waseTrevi. Ibuyisiwe, ibivaliwe kancane isikhashana, kepha isivele ikhona kuyo yonke inkazimulo yayo. Enye indawo ohlangabezana nayo uhamba i- I-Pantheon ka-Agrippa, etholakala phambi kwesikwele esincane lapho ungama khona ukuphuza ikhofi noma okuthile okusha. Uyakuthanda ukwethuka okuncane? Unefayela le- Amathunas (Domitila, Priscila, Santa Inés, San Calixto naseSan Sebastián).
Ngicabanga ukuthi imayelana hlukanisa ukuvakashela eRoma kube yiRoma yasebukhosini, iRoma yamaKrestu, iMyuziyamu yaseRoma kanye neRoma evulekile. Ngokusobala, ngesikhathi esiningi ungahlala wenza izinto eziningi, ngisho nokuhamba nokuhamba ngaphandle kokwenza noma yini ethile, into engihlala ngiyincoma.
Uma unentshisekelo, ekugcineni yenza okuthile uhambo losuku Ungazi ezinye zezindawo ezinhle zokuhlala eziseduze ne- EMpumalanga Villa o I-Villa kaHadrian futhi sekusele kancane, i-ostia yasendulo.
Indlela enhle yokonga, uma inhloso yakho ukwazi okuningi, ukuthenga i- Ukudlula KwamaRoma noma i Ikhadi le-OMNIA Vatican neRoma. Kokubili kunikeza izaphulelo kuzindawo ezahlukahlukene zokuheha futhi kuvumela ukusetshenziswa kwezithuthi zomphakathi edolobheni. Eyokuqala inezinguqulo ezimbili, izinsuku ezimbili noma ezintathu, nezindleko, izinsuku ezingama-32 ezingama-euro kumuntu ngamunye omdala nezintathu, ama-euro angama-52. Okwesibili kubiza ama-euro ayi-113 kumuntu omdala ngamunye. Kufanele uqhathanise ukuthi ikuphi okukhangayo okukodwa okubandakanya nokukhetha.
Ekugcineni, i I-gastronomy yamaRoma Kuhle futhi njalo ikhefu lapho ubuka khona indawo lizohambisana no-ayisikhilimu, i-pizza, ipuleti le-pasta, ubhiya omusha, nanoma yini oyifunayo. Njengoba ukwazi ukubona, umbuzo ka kungani uhambela iroma Inezimpendulo eziningi ezingaba khona kodwa kunento eyodwa ehlala iqinisekile: IRoma ngeke neze ikudumaze futhi ngiyakuqinisekisa, uzofuna ukubuya.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Kungani uhamba uye eRoma
Yini amaHampton e-United States
Polyphemus futhi Odysseus